IAdobe nguJoshua Desert Retreats
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguIrene V
*IHolide yoBusuku obu-3 ubuncinci bokubhukisha-uMbulelo 4 Ubuncinci bokubhukisha ngoBusuku*
I-Adobe ibonisa ukuphuma kwelanga okumangalisayo, ukutshona kwelanga kunye nekhephu eligqunywe yintaba.Isicwangciso somgangatho sibandakanya igumbi elikhulu, elijikelezwe ngemiqadi enzima, igumbi lokuhlala elisezantsi elinendawo yomlilo yamatye kunye negumbi lokuhlala elahlukileyo / iofisi enefestile ejikelezileyo.
Ilanga, i-BBQ, inkanyezi kufuphi nomlilo kwipatio enkulu, ejikelezayo, sebenza edesikeni, ubukele imuvi kwiTV yesathelayithi, okanye uxhome kwaye ufunde incwadi ngembali yendawo.
Idityaniswe nekhaya lethu elikufutshane laseGodwin Ranch kwipropathi enye, i-Adobe inokuba yindlu yeendwendwe zakho.
Iphuli kwabelwana ngayo phakathi kukaGodwin & Adobe.
I-Adobe ivakalelwa kukuba ikude kodwa yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba ukusuka ekuthengeni nasekutyeni kwi-29 Palms kunye nomnyango weJoshua Tree Park.IPam Springs yiyure nje enye kude.
Ibhedi enye yaseKumkani yaseMpuma, kunye nebhedi enye eyiTwin Rollaway.
Igumbi lokuhlambela elinye eligcweleyo, & neshawari yangaphandle/ibhafu (engaqhagamshelwanga kumanzi ashushu endalo ashushu ehlotyeni)
I-Charcoal BBQ, izihlangu zamahashe, intoa yangaphandle, indawo yomlilo yangaphakathi, igalufa, ibhafu eshushu & nequla elingaphezulu komhlaba ekwabelwana ngalo nepropathi yethu yakwaGodwin.
I-Joshua Tree Village kunye neDowntown 29Palms yindawo ekhethekileyo yasekhaya kunye negcisa eliphefumlelweyo. Qiniseka ukuba uthatha ixesha lokuphonononga iivenkile ezininzi ezinomdla kunye neendawo zokutyela ecaleni kohola wendlela.Kukho iMarike yamaFama aQinisekisiweyo ebalaseleyo eyenzekayo ngeMigqibelo 8:00 AM ukuya 1:00 PM xa idolophu ikwindawo edlamkileyo kwaye unokufumana incasa yencasa yasekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Irene V
I grew up in Hawaii, so I know about being connected to the natural life force of the land. I bought my first house in this area 20 years ago to use as a getaway with family and fr…
Xa ubhukisha unikwa inombolo yam yeseli ngemibuzo eza apha endleleni.Ekufikeni kwakho endlwini uya kufumana iphepha loqhagamshelwano elineenkcukacha zikaxakeka kunye neenombolo kunye nenombolo yam yeselula apho ndifumaneka khona 24/7 365 iintsuku ngonyaka ukuba kukho nantoni na evelayo nceda ufowunele isicatshulwa nangaliphi na ixesha okanye imini.
Xa ubhukisha unikwa inombolo yam yeseli ngemibuzo eza apha endleleni.Ekufikeni kwakho endlwini uya kufumana iphepha loqhagamshelwano elineenkcukacha zikaxakeka kunye neenombolo kun…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Joshua Tree